သင်္ချာကိုနည်းနည်းပါးပါးကြောက်စရာကောင်းအောင်ကူညီပါ။ ပညာရေးအတွက် Austin Partners
မင်းအိပ်ယာအောက်မှာရှိနေတဲ့အမှောင်ထုဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နဂါးကိုကြောက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်သင်ကလူရွှင်တော်များ၊ အရုပ်များ၊
သို့သော်ကလေးဘဝကြောက်ရွံ့မှုများသည်ဆိုးရွားလွန်းလှသည်။ သင်ရွယ်တူချင်းများရှေ့တွင်တင်ဆက်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ဘယ်သောအခါမျှမှန်ကန်သည်ဟုမထင်ရသည့်စိန်ခေါ်မှုများရှိသောသင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်များလာနိုင်သည်။
သင်္ချာဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကိုခံစားနေရသူတစ် ဦး သည်သင်္ချာဘာသာရပ်တွင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်းသေချာစွာစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုစွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်. လေ့လာရေး အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သောသင်္ချာကျောင်းသားများသည်သူတို့သင်္ချာတွက်ချက်မှုများပြီးစီးရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်္ချာကိုရှောင်ရှားခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှု၊ ထိတွေ့မှုနှင့်သင်္ချာအလေ့အကျင့်များလျော့နည်းစေသည်၊ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများ၏စိုးရိမ်မှုကိုသာတိုးစေသည်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်း (MCC) ကိုစုဆောင်းသောအခါဤကြောက်ရွံ့ခြင်း၏တည်မြဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရသည်။ လူတို့၏အပြုအမူသည်မကြာခဏ“ m” စကားလုံးကိုဖော်ပြရုံဖြင့်ပြောင်းလဲတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ကြားရသည် -“ ငါဟာသင်္ချာပညာမှာမကောင်းဘူး။ ကိုယ့်သင်္ချာဘာသာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေကိုကျူရှင်မပေးနိုင်ဘူး”
သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားနှင့်မဝေးနိုင်ပါ! သငျသညျသင်္ချာကိုကြောက်လန့်လျှင်ပင်, သင်နေဆဲကူညီနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်သုံးခုကိုဒီမှာ။
သင့်အနေဖြင့်စာသင်ခန်းဆရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MCC ညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ် ဦး ထံမှအမြဲတမ်းအကူအညီလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MCC အစီအစဉ်သည်ခြောက်တန်းနှင့်သတ္တမတန်းကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရှုပ်ထွေးသောညီမျှခြင်းများကိုကျောင်းသားများကူညီရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ခန်းစာများကိုကြိုတင်ရရှိမည်ဖြစ်သဖြင့်သဘောတရားများကိုကြိုတင်လန်းဆန်းဆန်းစစ်ရန်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။ သင်မသေချာသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပါကဆရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MCC ညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ် ဦး ကကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
အမှုအရာခက်ခဲတဲ့အခါသင်ကောင်းသောအပြုအမူပုံစံနိုင်ပါတယ်။ MCC သည်ကျောင်းသားများ၏သင်္ချာခံစားမှုကိုပိုမိုခံစားစေပြီး၎င်းတို့၏ကြောက်ရွံ့မှုကိုလျော့ကျစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်ခုခုခက်ခဲလွန်းသည့်အခါကျောင်းသားများသည်မကြာခဏပိတ်ကြသည်။ သင်္ချာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုသည်မှာအဖြေကိုအလျင်အမြန်မသိနိုင်ချိန်တွင်အေးခဲနေသောကျောင်းသားများနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကောင်းသောအပြုအမူကိုသင်ပုံစံချနိုင်သည်။ မသေချာခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှားယွင်းမှုများကိုပင်ပြုလုပ်မိခြင်းကအဆင်ပြေကြောင်းပြနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများအဖြေအားလုံးမရှိခြင်းနှင့်အမှားမလုပ်ခြင်းတို့သည်ဘာမျှမမှားကြောင်းသတိပြုမိသောအခါသူတို့သည် ပို၍ ကြိုးစားရန်ကြိုးစားကြသည်၊ ထိုအလေ့အကျင့်ကသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်သင်ယူစေသည်။
သင်္ချာဟာညီမျှခြင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ။ MCC ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာကျောင်းသားများ၏သင်္ချာစွမ်းရည်အပေါ်ယုံကြည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကဲ့သို့သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်ကျောင်းသား၏သင်္ချာကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသော်လည်းကျောင်းသားများအနေဖြင့်ယခုအပတ်ပေါ်မူတည်နိုင်သည့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုလည်းပေးသည်။ သင်္ချာစာသင်ခန်းမှနည်းပြများသည်သင်္ချာသဘောတရားများကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုအာရုံစိုက်သည်။ ရပ်ရွာမှအဖွဲ့ဝင်များသည် ၄ င်းတို့၏အောင်မြင်မှုကိုအမှန်တကယ်ဂရုပြုကြောင်းကျောင်းသားများသိစေချင်သည်။
ကြောက်ရွံ့စရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်္ချာတစ်ခုထဲမှာတော့မလိုအပ်ဘူး။ ကျောင်းသားများသည်သင်္ချာကိုကြောက်ရွံ့မှုနည်းလာစေရန်ကူညီပေးပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သင်္ချာစိုးရိမ်မှုအချို့ကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ https://austinpartners.org/classroom-coaching။ နွေ ဦး ရာသီစာသင်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အချိန်ဇယားနှင့်အညီအလုပ်ဖွင့်ထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမြဲဆက်သွယ်ပါ။
ရေးသားချက် - အက်ရှလေယီမန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ Austin Partners မှပညာရေး
Prevရှေ့APIE ၏အချပ်: စက်တင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာ
နောက်တစ်ခုAPIE ၏အချပ်: နိုဝင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာနောက်တစ်ခု